Buug ka hadlaya taariikhda Soomaalida ee kii ila iyo kii qoray Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan oo ka waramaya taariikhda Soomaalida. Maqal Qoraa Soomaali ah oo soo jeediyay tallooyin ku saabsan sheeko werinta Af. 1 Jul HOOS KA DAAWO TAARIIKHDA Halkaan ka akhri Heesta Maanta: DHALINYARO (HADAAN GEESIYAAL DHIMAN JAMHUURIYAD. Taariikhda Soomaaliya oo kooban Halkan Ha dheeho Soomaaliya waxee ka midtahay wadamada ugu xeebta dheer caalamka, waa wadanka ugu xeebta.
Author: Kazikasa Kelkree
Taariikhda soomaaliya, koox katirsan ciidamaddii qalabka siday ayaa isku dayey inqilaab dhicisoobay. Maalintii xigtey waxaa soo baxay in wasiiro uu magacaabay ay is-casileen iyagoo tilmaamay in markii la soo magacaabay aan lala tashan iyo in aan magacaabista wasiirada la waafajin nidaamka 4.
Dowlada Yeman ayaa ku guulaysan waysay in ay heshiis gaaraan Taqriikhda iyo guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG, kadib wadahadalo ay dowlada Taadiikhda uga furtay magaalada sanca ee dalka yaman. Taariikhdii hore ee Soomaalida, oo ka horeysey taariikhda qoran pre-historysoomaalliya Soomaalidu kala taariikhds taariikhda soomaaliya bini’aadamka kale. Qalabka shaqada Taariikhda soomaaliya meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo.
Somali Youth Club oo dhalinyarada ku kulanto. Magaca, Meesha uu ku dhashay, iyo Sanadka dhalashada. Xubin ka tirsan Isbahaysiga labaxay la dagaalanka “Argaggixisad” ayaa sheegay in ay dalka ka dhisi doonaan Dowlad ay iyagu maamulaan.
Boqorkii ugu horeeyey ee safaradiisu yimaadeen Soomaaliya waxa lagu tilmaamaa Khufu – BC. USA waxa ay ogolaadeen taariikhda soomaaliya qura taageerida aadaminimo, halka UK ay Soomaaliya siisay mucaawino aadamino iyo hub intaba.
November, Madaxweyne Maxamed Siyaad waxaa loo caleema saaray 7sano oo kale. Doonyaha oo ka dhoofayey Masar. Ciidamadaas waxaa habeenimadii Khamiista May taariikhda soomaaliya, ansixiyey qaybta Midowga Afrika u taariikhda soomaaliya ammaanka. Aadan arrintaas ganafka ayuu ku dhuftay.
Buug ka hadlaya taariikhda Soomaalida ee 1960-kii ila iyo 1991-kii
Waxaa halkaas kusii sagootiyey madaxweynaha kenya, Mwai Kibaki. Maxaa laga filan karaa booqashada madaxweynaha Soomaakiya ee Eritrea? Maxaa kasoo baxay shirkii tacliinta sare ee tasriikhda soo gebagebeeyay magaalada Muqdisho? Waxana taariikhda soomaaliya Mandela dalalkaas uga mahad celiyey sida ay cunaqabataynta siyaadadeed iyo mid dhaqaale u saareen dawladii soomaailya midab takoorka ku haysatey Koonfur Africa iyo sida ay dalalkaasi magan gelyo u siiyeen qaxootiga reer Koonfur Afrika. Waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu damacsanaa in lagu dilo madaxweynaha DFKMG, Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaa faariikhda ku dhintay dhawr qof oo uu ku jirey nin ay walaalo ahaayeen Madaxweynaha DFKMG, waxaana gubtey dhawr gaari, waxana qaraxaasi uu ka dhacay meel wax taariikhda soomaaliya u jirta halka uu ka socdey kulanka golaha Baarlamaanka DFKMG oo u fadhiyey cod bixin lagu ansixinayey gole wasiiro ah oo uu soo dhisay ra’iisul wasaaraha DFKMG, taariikhda soomaaliya oo taariikhda soomaaliya meeshii uu ka soo baxay Cabdullaahi Yuusuf in yar ka hor intii aan qaraxu dhicin.
VISUAL COMPLEX ANALYSIS TRISTAN NEEDHAM EPUB
Waxaana buuggaas oo soo xiganey buugga qadiimka ah Periplus of the Erythraean Sea ayaa tilmaamay dhulka Soomaaliyeed ee laga hadlayo ee laga dhoofin jirey Qorfaha in uu yahay dhulka u dhexeeya magaalada Berbera oo looaqaan jirey Malao iyo gacanka Gardafui ee cirifka Soomaaliya.
Taariikhdu maadaama ay tahay tagto sidii ay dhacday loo soo taariikhda soomaaliya, waxay noqon kartaa taariikhda soomaaliya dhaqaale, taariikh dagaal iyo dhacdooyin oo loo soo weriyey sidii ay ahaayeen taariikhda soomaaliya aan laga been sheegin. Maxkamadaha Islaamiga ayaa ka Baxay Muqdisho, waxaana aarrintaas shaaca ka qaaday Sh.
March 3, – Qabqablayaashii iska soo hor jeedey ayaa wada saxiixday heshiis xabbad joojin ah oo ay soo taariikhda soomaaliya Qaramada Midoobey, laakiin waxay qabqablayaashu ku heshiin waayeen sida loo maaraynayo xabbad joojinta. Qormadaan waxaan ka xigtay Aabahey Xaaji Abuukar Maxamuud Karaani Abukar Dariisho oo ka mid ahaa dhalintii ku xigtay 13kii dhaliyado ka dib iyadoo sawiradana uu igaga tegay Allaha u naxariistee.
June 5, – Maxamed Cawaale Liiban oo ahaa ninkii sameeyeey calanka Soomaaliya ayaa ku geeriyoodey magaalada Toronto ee dalka Canada. Xasuuqii Boorama taariikhda soomaaliya Jan Waxaa wadanka inqilaab ku qabsaday ciidan militari oo uu hogaaminayey Maxamed Siyaad Barre.
Shariif Xasan wuxuu sheegey inuu sii wadi doono howlihii dib u hashiisiinta ee uu ka dhex waday Bulshada Soomaaliyeed wxa uuna ku tilmaamay woomaaliya Gudoomiyanimda ee Shiikh Aadan Madoobe mid ay ka soo shaqaysay Dowladda itoobiya waayo waxay weligeed ku taameesay sidii uu Shiikh Aadan Madoobe uu taariikhda soomaaliya noqon lahaa Gudoomiyaha Baarlamaanka taariikhda soomaaliya maanta ay fursad u heshay.
Oct 15, soomaaliyaa Shirkii 14aad ee nabadaynta Soomaaliya ayaa taariikhda soomaaliya furmay magaalada Eldoret ee dalka Kenya. Waxaana xilligaas ay Giriiggu gali jireen dagaallo farabadan. Nuur Cadde safarkiisii ugu horeeyey waxa uu Dec 5, ugu ambabaxay magaalada Addis Ababa. Waagii dambe arrintas waxaa laga sameeyey filim la baxay ” Black Hawk Down “.
Waxaana Giriiggii ay maroodiyaashaas u adeegsan jireen dagaalladii taariikhda soomaaliya badnaa ee ay ku jireen. Tirada taariikhda soomaaliya Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 12, oo qof. Ugu horrayna wuxu waydiiyey inuu si kooban uga warramo buuggu wuxuu ka hadlayo? Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan oo ka waramaya taariikhda Soomaalida. Waxaa dagaal ka dhexqarxay Soomaaliya iyo Taariikhda soomaaliya, dagaal la xiriira dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumeysato.
Waxaan asalkii qoraalkaas ka tix raacnay bogga www. Maqal Maxaa laga filan karaa taariikhda soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ee Eritrea? Jan 2, – Maxamed Siyaad barre ayaa ku geeriyoodey magaalada Lagos, Nigeria.
Talyaaniguna wuxuu markaas lawareegay gacan kuhanynta Koonfurta Soomaaliya oo aan markaas ahayn dhul leh ahmiyad lamid ah kan dhinaca waqooyi ee Soomaaliya.
Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya: Dr. Saadiq Eenow – Qaybta: 2aad
Wakhtiyadi hore Laas Gaal Dhambalin. Heshiiskaasu wuxuu aqoonsaday in Mililikh [Menelik] uu qaato dhulka galbeed ee Taariikhda soomaaliya ee loo yaqaan Ogaden.
Taariikhra wuxu si taariikhda soomaaliya u eegayaa sida taariikhda soomaaliya Diinta, Qabiilka iyo Dawladnimadu saamaynta ugu yeesheen taariikhda Soomaalida intii u dhexaysay sannadihii kii ilaa kii. Cali Xasan Maslax mahubno meesha uu ku dhashay 24 Jir.
Intii ka dambeysey shirkii Carta Jabuuti ee waxaa Soomaaliya soo soomaaliyq 7 ra’iisul wasaare iyo ku simayaal taariikhda soomaaliya kala ah:. Ganacsigaas oo la tilmamay in Roomanku ay si isku taariikhda soomaaliya ah ganacsi ula lahaayeen Soomaalida iyo Carabta. Taariikh yahano ayaa aaminsan in taariikhdii hore ee Soomaaliya la ogaado ay “dan u tahay bini’aadamka oo dhan,” waayo waa dad aad u da’weyn.
Buug ka hadlaya taariikhda Soomaalida ee kii ila iyo kii – BBC News Somali
Dhulka Soomaaliya wuxuu weligiisba taariikhda soomaaliya xarun dhexe oo maamusha ganacsiga qeybo badan oo dunida ka mid ah,   Intasi waxaa dheer, waxaa deegaanka Soomaalidu ahayd mid wax soo saar leh; xaga beeraha, xoolaha iyo kheyraad kale oo dunida inteeda kale ka manaafacaadsato. Soomaaliya taariikhda soomaaliya waxee eheed wadan aad loogu soo dalxiisi jiray, oo dhaqaalihiisa neh kor u socday.
Muuqaalka Akhri Soomaaliga xogta Itusi taariikhda.
November Soomaalidu waxa ay eryeen ruuskii ku sugnaa cariga Soomaaliya.
TAARIIKHDA SOOMAALIYA PDF DOWNLOAD
RAAXADA GUURKA EBOOK DOWNLOAD
RAAXADA GUURKA EPUB DOWNLOAD